युएई जाने नेपालीले घरबाट हिँडेदेखि फर्कंदासम्म ख्याल गर्नुपर्ने कुरा (भिडियाे)
काठमाडौं, चैत १३ – विदेश जाने भनेपछि धेरैलाई धेरै कुरा बुझेर जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले पाइलैपिच्छे समस्यामा पर्ने अनि धेरै त ठगिमा पनि पर्छन । विदेश जाने तयारी गर्दादेखि नै सचेत हुने हो भने समस्या पर्न र ठगिबाट जोगिन सकिन्छ ।
त्यसका लागि विदेश जाने भनेर सोच्दादेखि नै सचेत हुनुपर्छ । व्यक्तिले विदेश जान एजेण्ट वा म्यानपावर छनौट गर्छ । सावधानी त्यहीँबाट अपनाउनुपर्छ ।
तपाईं युएई जाने तयारी गर्दै हुनुुहुन्छ भने तपाईंले घरबाट हिँड्दादेखि सम्झौता अवधिभरी के के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा युएईको आबुधाबीमा रहेको नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव कृष्ण आर्यालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । उहाँले दिनुभएको सुझाव यस्तो छ ।
घरबाट हिँड्नु अघि
कुनै व्यक्ति युएई आउँदा आधिकारिक एजेण्ट र वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचिकृत म्यानपावर छान्नुपर्छ । विभागका अनुसार एजेण्ट भन्दा पनि सूचिकृत म्यानपावर आउँदा सुरक्षित भइन्छ । म्यानपावर छान्दा पनि त्यो कतिको भरपर्दो र विश्वासिलो छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ ।
त्यो चाहिँ उसले गरेका कामका आधारमा भन्ने हो । कस्तो व्यक्तिले चलाएको हो, यसभन्दा अघि उसले पठाएका व्यक्तिहरु समस्यामा परेका छन् कि छैनन् । समस्यामा पर्दा त्यसलाई समाधान गरेको छ कि छैन भन्ने हेरेर म्यानपावर छान्नुपर्छ । म्यानपावरले छानेर उसले भिसा आयो भनेपछि श्रम स्वीकृतीको कुरो आउँछ ।
श्रम स्वीकृती गर्दा अभिमुखिकरण तालिम लिएको प्रमाण पत्र, कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा गरेको रसिद, बीमा गरेको कागजातको प्रतिलिपी, कम्पनीसँगको सम्झौताको सम्झौतापत्र र मेडिकल गरेको रिपोर्ट आवश्यक पर्छ ।
त्यो भन्दा अघि पनि कामदारले सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कम्पनीसँगको सम्झौता हो । सम्झौतापत्रमा के लेखिएको छ त्यो कुरा राम्रोसँग हेरेर मात्रै त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । राम्रोसँग हेरिएन भने पछि समस्यामा पर्न सकिन्छ । सेवा सुविधामा चित्त बुझेन भने नेपालमै हुँदा कामदार म विदेश जान्न भन्न पाउँछ त्यसैले सबै भन्दा ध्यान त्यतिबेलै दिनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा हिँड्नु अघि आफू जान लागेको देश, कम्पनी, त्यहाँको काम, आफूलाई पठाउने एजेण्ट र म्यानपावरका बारेमा परिवारलाई भन्नुपर्छ । उनीहरुको सम्पर्क नम्बर र आफ्ना कागपत्रको एक प्रति फोटोकपी परिवारलाई छोड्नु पर्छ । त्यसले पछि विदेशमा समस्यामा परिहाल्यो भने त्यसबाट उम्किन सजिलो हुन्छ ।
विमानस्थलमा के गर्ने ?
विमानमा चढ्नु अघि आफ्नो पासपोर्ट, भिसा अनि आफू जान लागेको काम र कम्पनीसँग सम्बन्धित कागजात साथमा राख्नुपर्छ । लिएर जाने सामान विमान कम्पनीले तोकेको भन्दा धेरै छ कि छैन भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
लगेजमा लान नमिल्ने कुराहरु हाल्नु हुँदैन । आफू जान लागेको देशमा निषेध गरिएका सामान हाल्नु हुँदैन । विमानस्थलमा रहेको अध्यागमनको कार्यालयमा सबै कुरा पुरा गरेपछि विमानमा बस्न पाइन्छ ।
विमानमा के गर्ने, के नगर्ने ?
विमानभित्र विमानका कर्मचारी वा परिचारिका (एयरहोस्टेज)ले भनेको निर्देशन मान्नुपर्छ । आफ्नो तोकेको सीटमा बस्ने अनि अरुलाई अप्ठ्यारो हुने कुनै काम गर्नु हुँदैन ।
केही विमानमा रक्सी खान पाउने व्यवस्था हुन्छ भने केहीमा निषेध हुन्छ । ती नियमलाई पालना गर्नुपर्छ । विमानमा रक्सी खान पाइने व्यवस्था छ भनेपनि आफू सम्हालिन सक्ने गरेर मात्रै खानुपर्छ ।
विमानबाट उत्रिएपछि विमानस्थलमा रहेको पासपोर्ट कन्ट्रोल भनेर लेखिएको ठाउँमा जानुपर्छ । त्यो अध्यागमका कर्मचारी बस्ने ठाउँ हो । त्यहाँ आफ्नो सक्कल राहदानी र भिसा देखाउनुपर्छ । युएईको हकमा आँखाको स्क्यान पनि गरिन्छ ।त्यहाँका कर्मचारीले छाप लगाइदिएपछि ब्याग आउने ठाउँबाट ब्याग लिएर एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । बाहिर निस्किएपछि सम्बन्धित कम्पनीको व्यक्ति लिन नआएसम्म कतै जानु हुन्न ।
कम्पनीमा पुगेपछि कम्पनी र देशको कानुन मानेर काम गर्नुपर्छ । केही समस्या परेमा युएईको आबुधाबीमा रहेको नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
(नेपाली कामदारले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा र अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव कृष्ण अर्यालसँग मोहन पौडेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।)